मधुमेह उपचारमा ढिलाई भएको छ ? सावधान ! गुम्न सक्छ आँखाको दृष्टि - Dainik Plus info
Home / Health / मधुमेह उपचारमा ढिलाई भएको छ ? सावधान ! गुम्न सक्छ आँखाको दृष्टि
मधुमेह उपचारमा ढिलाई भएको छ ? सावधान ! गुम्न सक्छ आँखाको दृष्टि
तपाईं ४० वर्ष कटिसक्नुभएको छ ? योभन्दा पहिला नै मधुमेह लागिसकेको छ ? होसियार रहनुहोस्,मधुमेहले सुटुक्कै तपाईंका आँखाको दृष्टि गुम्न सक्छ। त्यसैले बेलैमा मधुमेह र आँखाको जाँच गर्नुहोस्।
बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ? जापानमा गरिएको एक अध्ययनले यसो भन्छ,एक चोटी पढ्नैपर्ने